प्रमुख दल संघीयताबाटै भाग्न खोजेको आशंका - Karobar National Economic Daily
प्रमुख दल संघीयताबाटै भाग्न खोजेको आशंका
query_builderDecember 27, 2016 7:30 AM supervisor_accountजगन्नाथ दुलाल visibility1758
काठमाडौंः प्रमुख राजनीतिक दलहरू ०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न लागिपर्नुको साटो खिचातानीमै अल्झिएका छन् । एकजुट भई संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भए पनि कार्यान्वयनमा भने तत्परता देखिएको छैन ।
यति बेला प्रमुख दल संघीयतालाई संस्थागत गर्नुभन्दा पनि त्यसबाट भाग्न खोजेको आशंका बढ्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिनु अनि प्रदेश सीमांकनको किचलोमा अल्झिनुले पछाडि फर्किन लागेको आशंकामा बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबारदेखि दुई दिन बसेको पदाधिकारीसहितको बैठकले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका लागि गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संरचनामा जान समय लाग्ने जिकिर गर्दैै पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको बताए ।
“अब देशलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्छ, रोक्नु हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन नै हुनुपर्छ”, नेता पौडेलले भने, “अहिले अन्तरिम व्यवस्था नै सहज छ । पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसारको तह बनाउन थुप्रै समय लाग्छ ।” कांग्रेसले ०७४ माघ ७ गतेअगावै निर्वाचन नभए संविधान कार्यान्वयन थप जटिल हुने निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न मागसमेत गरेको छ । संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरिएको छ । आयोगले प्रतिवेदन तयार पारे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुझ्ने समय दिएका छैनन् ।
आयोगका एक सदस्यले भने, “प्रतिवेदन बुझेपछि नयाँ संरचनामा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ भनेर बुझ्न नमानेको हो कि भन्ने लाग्छ ।” आयोगले प्रतिवेदन बुझिदिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई पत्र पठाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य मणि थापाले परिवर्तन खतरामा पार्ने खेल भइरहेको स्वीकार गरे । एमाले परिवर्तनका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कन खोजेको आरोप लगाउँदै नेता थापाले अवस्था जटिल बनेको बताए । “जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि खतरामा पार्ने खेल भइरहेको छ”, उनले भने, “नेपालको राजनीतिमा पछाडि फर्कने प्रवृत्ति बन्न खोजेको छ । हामी त्यसको विपक्षमा छौं ।”
एमालेले पाँचवटा प्रदेश भन्नु र प्रदेश नम्बर २ मा गल्ती भएको भन्दै सच्याउन माग गर्नु संघीयताबाटै पछाडि फर्कने संकेत भएको उनको जिकिर छ । कांग्रेस पनि परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने भन्दा एमालेसँगै पुरानै संरचनामा निर्वाचन भनेर भाग्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए ।
दोस्रो ठूलो दल एमाले संविधान संशोधनका लागि तयार नहुँदा स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको विषयसमेत ओझेलमा परेको छ । ५ नम्बर प्रदेश हेरफेरमा प्रस्तावमा असन्तुष्ट एमालेसहित नौ दल विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलित छन्, जसले गर्दा प्रदेशको संख्या सात तय भए पनि सीमांकन विवाद बढेको छ ।
यी दलले ०७४ माघ ७ गतेअगावै तीन तहको निर्वाचन गर्न मागसमेत गरेका छन् । सीमांकन विवाद नटुंगिएसम्म नयाँ संरचनामा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएको जानकार बताउँछन् ।
सोमबार एमाले मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै प्रदेश नम्बर २ गल्ती भएको स्वीकार गर्दै भने, “५ नम्बर प्रदेश उति बेलै सच्याएर पहाड–तराई मिलाइयो, २ नम्बरको हकमा उपयुक्त विधिबाट संशोधन गरौंला ।” अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा मात्र विवाद देखिएका बेला एमालेले २ का विषयमा पनि कुरा उठाएको हो ।
संविधानप्रति नै असन्तुष्ट तराई–मधेसकेन्द्रित दल पुरानो संरचनामा निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गर्छन् । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा गए त्यसले अकल्पनीय परिणाम ल्याउने सद्भावनाका महासचिव मनीष सुमनले बताए । “निर्वाचनको बारेमा हामीले सोचेका छैनौं”, महासचिव सुमनले भने, “संविधानलाई स्वीकार गर्ने सर्त संशोधन नै हो ।
संविधान संशोधन नभई हुने कुनै पनि निर्वाचन हामी सहभागी हुँदैनौं ।” उनीहरूको पनि मुख्य असन्तुष्टि प्रदेश सीमांकनमै छ । मधेसकेन्द्रित दलले संशोधनलाई संविधान कार्यान्वयनको पूर्वसर्त भने पनि एमालेलगायत दलले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिएका हुन् । सुमनले संशोधन नभई निर्वाचनको माग गर्नु कांग्रेस, एमालेले नै संविधानलाई धरापमा पार्नु भएको बताए । “यसले संघीयता मात्र होइन, संविधान नै धरापमा पार्छ”, उनले भने ।
विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले कांग्रेस र एमालेको अडान हेर्दा पछाडि फर्कन खोजेको आशंका गर्न सकिने बताए । “एमालेले अहिलेको परिवर्तन हाम्रोे एजेन्डा होइन भनेर खुल्लमखुल्ला भनिसकेको छ । कांग्रेसलाई पनि त्यति मन परेको छैन”, उनले भने, “मधेसले उठाएको मागलाई यिनीहरूले हलुका रूपमा लिएका छन् । यसले समस्या समाधान हुँदैन ।”
संघीयता प्रमुख राजनीतिक दल भाग्न खोजेको आशंका